Etu esi abawanye njikọta mmekọrịta ọha na eze | Martech Zone
Anyị na-ekerịta ihe ọmụma ederede na isiokwu nke akọwapụtara usoro asatọ iji mee ihe malite usoro mgbasa ozi gị. Otutu n’ime unu amalitela usoro mgbasa ozi gi ma enweghi ike ihu oru dika ichoro anya. Offọdụ n'ime nke ahụ nwere ike ịbụ nzacha algọridim n'ime nyiwe. Dịka ọmụmaatụ, Facebook, ga - achọ ịkwụ ụgwọ iji kwalite ọdịnaya gị karịa igosipụta ya onye ọ bụla na-agbaso ụdị gị.
Ihe niile na-amalite, n'ezie, site n'ime ka akara gị bara uru ịgbaso.
Kedu ihe kpatara ndị ahịa ji agbaso ụdị ntanetị?
Interest - 26% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu na akara ahụ dabara na ọdịmma ha
Inye - 25% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu na ika ahụ na-enye ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ dị elu
Personality - 21% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu na ụdị ahụ dabara adaba na njirimara ha
Aro - 12% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu na akara ahụ bara uru ịkwado ndị enyi na ezinụlọ
Ọha metụtara ọha - 17% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu na ika ahụ bụ ọrụ mmekọrịta ọha na eze
Nke ahụ kwuru, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ njikọ aka ị na-atụ anya, ihe ọmụma a sitere na Branex, 11 Ọha Mgbasa Ozi Ntinye aka na-akwado usoro nke na-arụ ọrụ, kọwaa ụfọdụ ụzọ ị ga-esi jiri:
Mụta ndị na-ege gị ntị - Chọpụta ihe kachasị ndị na-ege gị ntị site na ịlele ọdịnaya ndị ọzọ nke ekenyela ma kwuo okwu na nke kachasị… wee jiri otu usoro ahụ. Enwere m mmasị iji ngwaọrụ dịka BuzzSumo na Semrush maka nke a. Ma ọ dịkarịa ala, ị nwere ike nyochaa nsonaazụ ọchụchọ na forums, kwa.
Hazie ederede gị maka usoro mgbasa ozi ọhaneze ọ bụla - Na-ebuli vidiyo gị, onyonyo, na ederede maka ikpo okwu ọ bụla. Ọ na-eju m anya mgbe ọ bụla m na-ahụ mmadụ na-ebipụta nnukwu onyonyo… naanị iji hụ ka ebipụ ya na ngwa ahụ n'ihi na emeghị ka ọ dị mma maka ilele n'elu ikpo okwu.
O juru ndị mmadụ anya - Ndị na-eri ihe na-ahụ n'anya ịkekọrịta eziokwu, ọnụ ọgụgụ, ọnọdụ, nyocha (na memes) na soshal midia, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha nwere nghọta na-atọ ụtọ ma ọ bụ na-ama aka.
Mepụta ọdịnaya nwere nnukwu aka - Nyere nhọrọ n'etiti mmelite ugboro ugboro ma ọ bụ mmelite dị ịtụnanya, ọ ga-akara m mma na ndị ọrụ m na ndị ahịa na-etinyekwu oge ma na-eme mmelite dị ịtụnanya nke na-adọta uche ndị na-ege ntị.
Soro ndị na-eme ihe ike na-elekọta mmadụ na-arụ ọrụ - Ndị na - emetụta ya nwere ntụkwasị obi na njikọ aka nke ndị na - ege gị ntị. Itinye aka na ha site na mmekọrịta, mmekọ mmekọ, na nkwado nwere ike ịkwanye ndị na-ege ha ntị na akara gị.
Nye oku doro anya ime ihe - Ọ bụrụ na mmadụ chọpụtara tweet ma ọ bụ melite ọhụụ, gịnị ka ị na-atụ anya ka ha mee ọzọ? Ì setịpụwo atụmanya ahụ? Anọgidere m na-adọ aka ná ntị megide ire ere siri ike n'ime mmelite mmekọrịta, mana enwere m mmasị ịkwa njakịrị na nzọ ahịa azụ na onyinye, ma ọ bụ inye oku na-arụ ọrụ na profaịlụ m.
Choo oge kacha mma iji biputere - O nwere ike iju gị anya na nke a, mana ọ bụghị mgbe niile ka ị na-ebipụta ya, ọ bụ maka oge ndị folks pịa-ma kesaa ọtụtụ. Jide n'aka na ị na-anọ n'ihu usoro ahụ. Ọ bụrụ na, n'ehihie, pịa-udu dị elu… mgbe ahụ ijide n'aka na-ebipụta site n'etiti ehihie na oge nke gị ahịa.
Jiri vidiyo vidiyo na Facebook - Nke a bụ otu atụmatụ anaghị akwụ ụgwọ (ma) na Facebook na-aga n'ihu na-akwalite ike. Jiri nke a wee bie ndụ oge ụfọdụ site na nnukwu ọdịnaya maka ndị na - ege gị ntị.
Jikọọ otu dị mkpa - LinkedIn, Facebook na Google+ nwere ụfọdụ ịtụnanya, otu dị iche iche nwere nnukwu ihe na-eso. Kwusaa ozi bara uru ma ọ bụ bido mkparịta ụka dị ukwuu na otu ndị ahụ iji kwado onwe gị dị ka onye nwere ntụkwasị obi.
Kekọrịta oke ọdịnaya - Ikwesighi ide ihe niile ịkekọrịta. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụghị m mepụtara infographic a ma ọ bụ bipụtara m - ọ bụ ya mere ya Branex. Agbanyeghị, ọdịnaya na ndụmọdụ ọ gụnyere metụtara ndị na-ege m ntị nke ukwuu, yabụ aga m ekerịta ya! Nke ahụ anaghị anapụ m ikike na ụlọ ọrụ. Ndị na-ege m ntị nwere ekele na m na-achọpụta ma chọta ọdịnaya bara uru dị ka nke a.
Rịọ maka nzaghachi - ftgbanwe ndị na-ege ntị n’obodo chọrọ mkparịta ụka. Shiftgbanwe obodo gaa na ndị na-akwado ya chọrọ ọtụtụ ịrụsi ọrụ ike. Jụọ ndị na-ege gị ntị maka nzaghachi ma zaghachi ya ngwa ngwa iji bulie njikọta mmekọrịta gị na mmekọrịta gị!
Nke a bụ nkọwa info zuru ezu site na Branex:
Ozughị? Lee ụfọdụ ihe ndị ọzọ na Around.io, Zọ iri atọ na atọ dị mfe ịkwalite mmekọrịta gị na mgbasa ozi mmekọrịta gị ugbu a.
Na-ajụ ajụjụ na ntanetị gị na-eme ka ndị mmadụ kwuo okwu, na-eme ka njikọ gị dịkwuo elu. Jụọ ajụjụ a kapịrị ọnụ, nke kapịrị ọnụ karịa nke na-ada ụda okwu.
AMAs arụ ọrụ dị ukwuu na Reddit na Twitter. Ugbu a, ha na-arụ ọrụ dị ukwuu na Facebook kwa. Mee ka ndị mmadụ mara na ị ga-arụsi ọrụ ike ịza ajụjụ niile (n'otu isiokwu) maka oge ole na ole.
Mgbe onye ahịa jiri ngwaahịa gị na ihe gbasara ya (nyocha ederede ma ọ bụ foto ma ọ bụ vidiyo), kwalite ọdịnaya ahụ nye ndị Fans gị. Kindsdị posts ndị a (ọdịnaya ndị ọrụ) na-eme ka ndị ọzọ tinye aka.
ihe ọ bụla trending nwere ohere ka ukwuu nke ịbụ onye ihe ndị masịrị, kerịta ma ọ bụ kwuo maka ya. Chọpụta ihe na-agagharị na nke dịịrị ndị Fans gị ma kekọrịta ha oge niile.
Chọọ maka ndị ọrụ na-eji havehtags ma zaghachi na tweets na posts ha: nke a na - eme ka itinye aka na profaịlụ nke gị na - abawanye mgbe ha nyochara post gị.
Ọzọkwa, chọọ isiokwu metụtara gị ahịa na-ekere òkè na ndị na-eji ndị Keywords na ha posts.
Zaghachi mgbe niile na okwu ọ bụla ị natara na mgbasa ozi mgbasa ozi - nke a na-eme ka ndị mmadụ mara na ị na-eche ma ị na-ege ntị nke na-eme ka njikọta dịkwuo elu.
Idozi na kwalite ọdịnaya ndị ọzọ ma site na obere mbanye anataghị ikike: na-akpado isi iyi mgbe niile ka isi mmalite ahụ mara na ekwuru ha. Ọdịnaya na-enweghị aha na-akpata ntinye aka (obere oge ọ bụla) karịa nke nwere aha ma ọ bụ abụọ.
Denye ihe dị mma maka ọha mmadụ ma mee ka ndị mmadụ mara na ị na-eche banyere ya ụkpụrụ mmekọrịta mmadụ. Ọrụ ebere, enyemaka na ọrụ mmekọrịta mmadụ na-eme ka itinye aka na ya.
Gbaa ọsọ ma ọ bụ asọmpi ebe ịchọrọ / ịza ajụjụ bụ ihe dịka akụkụ nke inye onyinye / asọmpi. Na akpaghị aka na-abawanye njikọ aka.
Ziri ezi a otutu njikọ / ego na ịkọrọ ha na Ebe e si nweta (ịkpado isi iyi). Nnukwu aha na-ekwukarị ọtụtụ njikọ.
Jiri ya mee ihe Hashtag na-ewu ewu mgbe ịchọta ndị nwere ike jikọọ na ahịa / akara gị n'ụzọ ụfọdụ.
Chọọ na Chọpụta ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ (metụtara ahịa gị) na ebe dịka Twitter, Quora, Google+ na ndị ọzọ wee zaa ha.
Webata a ere obere oge/ ego ma ọ bụ gwa ndị na-agba ngwaahịa na-agba ọsọ na ngwaahịa - ịtụ ụjọ na-efu ga-enyere gị aka ịpịkwu aka na post gị.
Mgbe ị tweet ma ọ bụ zaghachi post, jiri animated gifs. GIFs bu ihe okike ma mee ka ndi mmadu nwee obi uto / ikwu okwu banyere ha (itinye aka).
Rịọ maka nzaghachi (na ụfọdụ ngwaahịa ị na-arụ ọrụ na) na echiche (maka ngwaahịa ọhụrụ ndị mmadụ chọrọ). Ọ bụ ihe ịtụnanya ịhụ ka ọtụtụ ndị Fans gị nwere nzaghachi ma ọ bụ echiche (mana gbachi nkịtị maka na ọ nweghị onye jụrụ ha).
Inye ọchị n'ime posts gị. Oge ọchị oge ụfọdụ na-adọta ọtụtụ mmasị / mbak ma ọ bụ ọbụnadị ikwu okwu oge ụfọdụ - ha niile na-eduga n'ịgbakwunye aka na ya, nwekwuo ike iru.
Do nyocha na ntuli aka (n'iji atụmatụ ntuli aka nke ebe dị ka Facebook, Twitter). Ọbụna mmadụ ole na ole na-esonye na ntuli aka na-enyere aka ịbawanye njikọ gị na iru ngwa ngwa.
Soro na ihe dị mkpa Mkparịta ụka Twitter n'ihi na njikọ aka na-adịkarị elu n'oge mkparịta ụka Twitter maka ọtụtụ ebumnuche (ọnụọgụ tweets, ewu ewu nke #hashtag, chat-community etc.)
Nwetara nyocha ndị ahịa? Kesaa ha na profaịlụ mmekọrịta gị ma kpoo ndị ahịa nyere gị nyocha / ọkwa.
Mgbe nile ewepụta nkeji ole na ole nke ụbọchị gị iji chọta na soro ndị dị mkpa site na ụlọ ọrụ / ahịa gị. (Ikwesiri iji ihe ndi ozo gha enyere gi aka)
Gosi ndi na ege gi nti na odi mmadu n’azu - site na iji ya emoticons dị ka ụmụ mmadụ ndị ọzọ.
Kekọrịta ọdịnaya dị mkpa n'oge ememe na ihe omume ndi ozo. Ihe ndị a na-enwetakarị ọnụego aka karịa ọrụ ndị ọzọ.
Wụt esịtekọm; na-ekele ndị Fans maka ihe ndị dị mkpa (na n'ozuzu ha) na ndị agbụrụ gị ga-eso gị.
Chọpụta ihe bụ oge kacha mma iji biputere (na-adabere na ọdịdị nke ndị agbụrụ gị) ma biputere n'oge ndị a. Shouldkwesịrị ịkwalite posts gị maka oke iru n'ihi na nke ahụ nwere mmetụta kpọmkwem na itinye aka n'ọtụtụ ọnọdụ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ime ka ndị mmadụ pịa, kwue ya hoo haa. “Pịa ebe a iji chọpụta ihe ndị ọzọ.” Ziga na Ihe ana-eme ederede na-eme nke ọma karịa itinye ndị mmadụ aka.
Gwa ndi ozo ka ha “Kpido enyi”. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eme nke ahụ na - eme ka ịnweta na ntinye aka na ntinye gị.
O doro anya na mgbasa ozi ọha na eze na-erukwu karịa mgbe ị Kpido ọnọdụ ha.
Anyị niile maara foto posts nweta ntinye aka (ma na Facebook na Twitter). Mana choro maka foto kacha mma mgbe ị na-ekerịta ha.
Ọzọkwa, gwa ndị mmadụ ka ha chegharịa ma ọ bụ kesaa n'ụzọ doro anya. Nke a na-agbaso iwu CTA.
Chọtara ihe enyemaka nke nyeere aka? Ma ọ bụ onye nyere gị aka na azụmahịa gị? Nye ha a gboo, kpado ha ma mee ka ndị ọkpọ gị mara.
Na-akwalite profaịlụ mmekọrịta gị na ntanetị ndị ọzọ. Enwere nnukwu ụlọ Pinterest? Echefukwala ịkwalite gị Pinterest board na Facebook ma ọ bụ Twitter (ma ọ bụ ebe ndị ọzọ) oge ọ bụla.
Rụkọta ọrụ ọnụ na soro ndị ọzọ na-ewu ewu ụdị / azụmaahịa na ịkekọrịta posts ma ọ bụ imepụta onyinye. Njikọ aka na-enyere gị aka iru ndị ọzọ (site na ụdị ndị ọzọ), na-eme ka njikọ na ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ gị.
Tags: branexbuzzsumonjikọ akaFacebookotúinfographicinstagramvideo vidiosemrushntinye mgbasa ozi na-elekọta mmadụTwitter